FI.co: Bringing Silicon Valley to Yangon
Bringing Silicon Valley to Yangon
2014-10-04, 09:00 AM
ParkRoyal Hotel Yangon, Ahlan Pya Pagoda Road, Dagon Township, Yangon
Silicon Valley is revered the world over for the technology companies it creates. Over the years, we've learned that the Silicon Valley mindset can be replicated in other entrepreneurial ecosystems and we can benefit greatly from the growth of technology companies locally. Yangon hasafast growing startup ecosystem, and entrepreneurs here are lucky to have so many opportunities available to take.
However, many people don't know about all of the resources available, the differences between them, or what resources are right for them. At this event, we will bring the collaborative knowledge sharing of Silicon valley to Yangon and giveaquick overview of what it takes to startup in Yangon.
နည်းပညာကုမ္ပဏီများတည်ထောင်မှုမှာ Silicon Valleyကို ကမ္ဘာကအလေးဂရုပြုကြရပါသည်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ၊ Silicon Valley ရဲ့အတွေးအခေါ်မျိုးကို အခြားသော စွန့်ဦးတီထွင် ဂေဟစနစ်တွေမှာ၊ ပုံတူပွားယူလို့ရတယ်၊ ပြည်တွင်းမှာ နည်းပညာလုပ်ငန်းတွေ များလာရင် အားလုံးအကျိုးများတယ်ဆိုတာသိလာကြသည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင် လုပ်ငန်းစတင် တိုးပွားမှုနှုန်း အလွန်လျှင်မြန်စွာတိုးတက်လာနေသည်။ စွန့်ဦးတီထွင်လိုသူများအနေဖြင့်များစွာသော အခွင့်အလမ်းများ ရှိနေသည်မှာကံထူးမှုပင်ဖြစ်သည်။
သို့သော်၊ အများစုမှာ တည်ရှိနေသော အသုံးပြုနိုင်သည့် ရင်းမြစ်များ၊ ကွဲပြားမှုများနှင့် ၎င်းတို့ အသုံးဝင်ပုံများကို သတိမမူမိကြချေ။ ယခု ဆွေးနွေးပွဲတွင် Silicon Valley အား Yangon သို့ကူးယူနိုင်ရန် စုပေါင်းအားဖြင့် သိရှိထားသော ဗဟုသုတ၊ သတင်းအချက်အလက်များ ဖလှယ်ကြမည်။ Yangon တွင်လုပ်ငန်း စတင်တည်ထောင်ရန် လိုအပ်ချက်များ၊​ လုပ်ဆောင်ရန် နည်းလမ်းများကို ဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်သည်။
Who Should Attend? ဘယ်သူတွေတက်သင့်သလဲ
Anyone who is launching or thinking about launchingalocal startupStartup တစ်ခုတည်ထောင်မည့်သူ၊ တည်ထောင်ရန် ကြံရွယ်နေသူ မည်သူမဆို Anyone who wants to meet local investors, accelerators, co-working spaces, and foundersပြည်တွင်းမှ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၊ accelerators များ၊ co-working နေရာများ၊ လုပ်ငန်းတည်ထောင်သူများနှင့်တွေ့ဆုံလိုသူများ
Anyone who wants to learn about the resources available for local entrepreneursပြည်တွင်းစွန့်ဦးတီထွင်သူများအတွက် မည်သို့သော အချက်အလက်၊ အထောက်ကူများရှိကြောင်းသိလိုသူများ What is the Agenda? Welcome and Socializing
Bringing Silicon Valley concept to Yangon (Presentation)
Potential of Myanmar Tech Market starting from 2015 (Presentation)
What it takes to startaTech Company in Myanmar (Panel Discussion)
This event is free to attend. အခမဲ့ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။For more free startup events, visit http://fi.co/events.
Managing Director, Strategic Development International Co., Ltd.
Software Architect & Managing Director , Myanmars.NET
The Founder Institute is the world’s premier startup launch program for talented entrepreneurs. Based in Silicon Valley and with chapters across 60 countries, the Founder Institute's mission is to "Globalize Silicon Valley" and build sustainable startup ecosystems that will create one million new jobs worldwide. Apply to the Yangon Founder Institute today, or learn more at www.FI.co.